wasmada naagta ninkeeda maka kormari kartaa? | shumis.net
Home » galmada » wasmada naagta ninkeeda maka kormari kartaa?
wasmada naagta ninkeeda maka kormari kartaa?
Ilo gaagaaban oo ku sugan khabiirinta ku xeel dheer dhanka ciyaarta sariirta ayaa sheegay in ilaa iyo afar arimo aysan raggu badan kood ka helin xilliga sariirta arrimahaa aya u arkaan in ay qalad ku yihiin in haweeneydu ku kacdo xilligaa afarta xilli ayaa ka mid ah.
Title: wasmada naagta ninkeeda maka kormari kartaa?